Jorge Burruchaga in lagu beddelo Gonzalo Higuain ayaa waxay shaki gelineysaa Lionel Messi inuu kooxda qaranka Argentina u ka sii mid ahaado ama uu hoggaamiyo.
Cabashooyinka gudaha kooxda ka imanaya ayaa sheegaya Messi inuu kooxda qaranka Argentina uu xil weyn ka qaban karin. Iyada oo marwalbana la barbar dhigo Diego Maradona sanaddi 1986-kii.
Sannadkaasi ciyaarti kama dambeysta ee Koobka Adduunka oo Mexico lagu qabtay, Galbeedka Jarmalka ee xilligaa oo laba gool ku hoggaamineyso ayey kooxda Argentina dib u soo rogaal celiyeen oo ay barbarro ula noqdeen.
Waxayna natiijada ciyaarta ka dhalatay ay saameysay sumcadda uu Maradona lahaa.
Halkaa markay xaaladdu mareyso ayuu Maradona kubbad uu u baasay Burruchaga ayuu teesta shabaqa ku taabsiiyey, waxaana dib u soo noqotay sumcaddii Koobka adduunka uu ku lahaa.
Haddaba, Messi ayaa qarankiisa Argentina soo gaarsiiyey seddex ciyaarood oo kama dambeys ah seddex sannno oo isku xigta.
Waxayna kooxda Argentina ay guusha ku raaceysay dhibco aad u yar ciyaarti koobka adduunka oo ay 2014-ka la ciyaareen Jarmalka, 2015-2016-kina ciyaaraha Copa America waxay kooxda Chili kaga reeyeen Rigoore loo dhigay.
Messi marki ugu horreyey wuxuu Argentina uu kaga soo caanbaxay 2005-tii xilligaasi oo uu dalkiisa la ciyaarayey xulka Hungary, waxaana aad loola dhacay lugta bidix sida uu kubadda ku yeelayo, uu ugu maareynayo iyo ciyaarta quruxda badan uu sioo bandhigay.nta ay ciyaartaasi socotay ayey Messi oo kubbad watay iska horyimaaddeen difaaca Hungary, wuxuuna ciyaartooyga difaaca ahaa uu ku sameeyey khalad aad u weyn balse wuxuu joojiyey Messi, Messi oo xilligaasi dagaal sameeyey ayaa waxaa la siiyey kaar cas sidaana ciyaarti lagaga saaray.
Go’aanka keenay kaarka cas in loo taago xilli ay xulka Chile sabtidi la ciyaarayeen ciyaaraha kubadda cagta ee Copa America waxay keentay iney ciyaarta kaalinta seddexaad ku dhammeystaan.
Arbiitaraha Paraguay u dhashay Mauro Diaz de Vivar ayaa garsoora ka ahaa ciyaarta kaarka cas lagu siiyey Messi oo ay Chili la ciyaarayeen, wuxuuna arbiitaraha uu go’aanka kaarka cas uu qaatay marki ay Messi iyo Gary Medel ciyaarta xurguf ku dhex martay.
Kooxda Argentina ayaa waxay dadaal ugu jirtay sidi ay kubadda u riixi lahaayeen hase yeeshee Medel iyo Messi oo iska horyimid ayaa kubbaddii Argentina joojisay isla-markaana kaar cas looga taagay Messina sidaana ciyaarti kaga baxay.
Haddaba, waxaa la isweydiinayaa Messi ma sidaa ayuu ku tagay? Ma laga yaabaa labada Kaar ee cas uu ciyaarta Copa America ka qaatay Messi ay sababto inuuba ka fadhiisto kooxda Argentina inuu mardambe u safan?
Waxay u badan tahay iney arrimahaasi sidaasi u dhacaan.
Hase ahaatee, Messi marki kooxda qaranka lagaga guuleystay 2016-kii ciyaarta Copa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fariistay xulka qaranka, go’aankaasi oo isaga u ahaa mid kama dambeys oo uu gaaray balse go’aankiisa mid dalka Argentina laga aqbalo ma noqon.
Markale ayuuna ciyaaraha dib ugu soo noqday marka uu go’aanka qaatay kaddib, ciyaaryahanka 32 jirka ah ayay hadda xaaladda ku cakirantay go’aanka uu horay u gaaray iyo kaararka cas uu ka qaatay ciyaaraha Copa Amerika darteed.
Wixi intaa ka dambeeyey Argentina ayaa soo bandhigtay qorshe cusub, iyada oo xalka kama dambeysta ah iney bixiso laga rajeeynayo Naadiga Barcelona.
Messi haddii uu doonayo inuu ciyaaraha uu iska sii wato, haddana Messi waa inuu sugaa shaqa joojin lagu sameeyo. Ururka Conmebol oo maamulo ciyaaraha kubadda cagta Koonfurta Mareykanka ayaa waxaa soo gashay fadeexad musuqmaasuq ee ka dhacy FIFA taasoo si weyn u saameyneyso sumacadda iyo jiritaanka ururkaasi.
Shakiga laga muujiyey ciyaarta Copa ee Messi kaar casa looga saaray, ayaa ah inuu Messi markale uu safaneyn ayna quseeyn arrimaha Xulka qaranka Argentina.
Xulka cusub ee Arjentina ee dib habeynta lagu sameeynayo inuu hoggaamiyo Messi ayaa shaki aad u weyn laga muujiyey.
Messi toddobaadyadi u dambeeyey sida uu u dhaqmay ayaa keentay in hadal laga keeno inuu xulka Arjentina uu hoggaamiyo waxayna warbaahinta dalka Arjentina iyo kuwa caalamkaba ay ahayd mid si weyn looga hadal hayo.